GNOME Archives - LinuxCapable
Otu esi etinye GNOME 41 Desktop na Linux Mint 20
Monday, December 27, 2021 by Jọshụa James
GNOME 41 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe anya, ngwa ọhụrụ na imeghari mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ bụ nkwalite siri ike sitere na GNOME 40 yana mmeghe nke onye ahịa desktọpụ ọhụrụ dịpụrụ adịpụ nke a na-akpọ Connections, ntọala mkpanaka ọhụrụ, multi-tasking emelitere, UI emelitere, na arụmọrụ azụ azụ, n'etiti ọtụtụ mgbakwunye ndị ọzọ. …
Categories Mint Linux Tags GNOME, Mint 20 Mint Linux
GNOME 41 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe a na-ahụ anya, ngwa ọhụrụ, na imegharị mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ bụ nkwalite siri ike sitere na GNOME 40 yana mmeghe nke onye ahịa desktọpụ ọhụrụ dịpụrụ adịpụ nke a na-akpọ Connections, ntọala mkpanaka ọhụrụ, multi-tasking emelitere, UI emelitere, na arụmọrụ azụ azụ, n'etiti ọtụtụ mgbakwunye ndị ọzọ. …
Categories Ubuntu Tags GNOME, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Tuesday, January 11, 2022 Fraịde, Ọktọba 22, 2021 by Jọshụa James
Fedora 35 ewetala ya ọtụtụ nkwalite karịa onye bu ya ụzọ na GNOME 41, Linux Kernel 5.14, yana ọtụtụ nkwalite ndị ọzọ n'ihu na azụ azụ nke mere ka mwepụta ọhụrụ ahụ dị ngwa ngwa, ngwa ngwa na ike ọ bụghị naanị na ụdị desktọpụ mana. na ihe nkesa…
Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 Tuesday, October 19, 2021 by Jọshụa James
GNOME 40 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe a na-ahụ anya, ngwa ọhụrụ, na imegharị mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ dị nnọọ iche na nke nsụgharị Gnome gara aga leburu anya. N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye GNOME 40 ọhụrụ na desktọpụ Ubuntu gị. Ịdọ aka ná ntị na GNOME…
Wụnye GNOME 41 na Debian 11 Bullseye
Wenezdee, Jenụwarị 19, 2022 Monday, October 18, 2021 by Jọshụa James
Ọtụtụ ndị ọrụ Debian 11 maara na Gnome 38 bụ ụdị ndabara nke codename Bullseye sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ka ewurula ọtụtụ hype gburugburu desktọpụ Gnome 41 ọhụrụ, ọtụtụ ga-achọ ohere ịwụnye na nwalee ma ọ bụ jiri ihe kachasị ọhụrụ na-enye site na…
Saturday, January 22, 2022 Sunday, October 10, 2021 by Jọshụa James
Ọtụtụ sistemụ desktọpụ Linux ọgbara ọhụrụ dị ka Fedora na-abịa na onye ọkwọ ụgbọ ala Nvidia etinyegoro ya na onye ọkwọ ụgbọ ala mepere emepe Nouveau maka kaadị vidiyo Nvidia. Maka ọtụtụ akụkụ, nke a bụ ihe a na-anabata; Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji sistemụ Linux gị maka imepụta eserese ma ọ bụ egwuregwu, ị nwere ike nweta ndị ọkwọ ụgbọ ala ka mma. Kemgbe ụwa, ndị ọkwọ ụgbọ ala nke Nouveau na-eji nwayọ karịa…
Fraịde, Ọgọstụ 20, 2021 by Jọshụa James
GNOME 40 na-ewebata ọtụtụ mgbanwe site na mgbanwe a na-ahụ anya, ngwa ọhụrụ, na imegharị mgbanwe azụ azụ iji melite arụmọrụ. N'ozuzu, ọ dị nnọọ iche na nke nsụgharị Gnome gara aga leburu anya. N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye GNOME 40 ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.04 gị. …
Categories Ubuntu Tags GNOME
Ọtụtụ ndị ọrụ Debian 11 maara na Gnome 38 bụ ụdị ndabara nke codename Bullseye sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ka ewurula ọtụtụ hype gburugburu desktọpụ Gnome 40 ọhụrụ, ọtụtụ ga-achọ ohere ịwụnye na nwalee ma ọ bụ jiri ihe kacha ọhụrụ na-enye…